Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.5.1.3 dhis aad wax soo saarka gaar ah
Dhisidda aad wax soo saarka gaar ah waa khatar sare,-abaalmarin sare. Laakiin, haddii ay u shaqayso, waxaad ka faa'iidaysan karaan loop a positive-celin oo awood cilmi kala.
Qaadashada hab ee dhismaha aad tijaabo gaar ah hal talaabo dheeraad ah, qaar ka mid ah cilmi dhab dhiso alaabta iyaga u gaar ah. Waxyaabahani soo jiidan ka qayb galayaasha, ka dibna u adeega sida dhufto ee loogu talagalay tijaabo iyo noocyada kale ee cilmi-baarista. Tusaale ahaan, koox ka mid ah cilmi-ee Jaamacadda Minnesota abuuray MovieLens , kaas oo bixiya lacag la'aan ah, aan ganacsiga ahayn talooyinka movie shakhsi. MovieLens ayaa si joogto ah shaqeeya tan iyo 1997dii, iyo inta lagu jiro waqtigan 250,000 users ka diiwaan gashan ku arzaaqnayna wax ka badan 20 milyan oo ratings ku saabsan in ka badan 30,000 oo movies (Harper and Konstan 2015) . MovieLens ayaa loo isticmaalo bulshada firfircoon ee dadka isticmaala si ay u qabtaan cilmi cajiib ah laga bilaabo jirrabaya aragtiyaha cilmiga bulshada oo ku saabsan darsaday in alaabta dadweynaha (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) In wax ka qabashada caqabadaha algorithmic in nidaamka talo (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; dib u eegis buuxda arki Harper and Konstan (2015) . Qaar badan oo ka mid ah tijaabo, kuwaas oo lahaa suuragal ah in aan aan cilmi isagoo dhamaystiran gacanta ku soo saarka dhabta ah ee shaqada.
Nasiib darro, dhismaha aad wax soo saarka gaar ah waa adag tahay, oo waa in aad u maleyso inay of sida abuurista shirkadda bilow-up a: khatarta sare-,-abaalmarin sare. Haddii ay tahay guul, habkani wuxuu bixiyaa inta badan gacanta ku timaada dhismaha aad tijaabo gaar ah la xaqiiqo iyo ka qayb galayaasha ka soo shaqeeya nidaamka hadda jira. Dheeraad ah, habkani kara waa awood si ay u abuuraan loop a-celin wanaagsan halkaas oo cilmi dheeraad ah u keenaysaa in wax soo saarka si fiican taas oo horseedaysa in dadka isticmaala in ka badan taas oo horseedaysa in ay cilmi dheeraad ah iyo wixii la mid ah (Jaantuska 4.15). In si kale loo dhigo, mar loop a-celin wanaagsan furmay, cilmi waa in ay qaataan ka fudud oo sahlan. Inkastoo yeellay ka iman kara in habkan, ma ka heli karaa wixii tusaalayaal kale oo guul, taas oo muujinaysa sida ay u adag tahay waa in ay si guul leh u fuliyaan. Laakiin, rajadaydu waa in qorshahan uu noqon doonaa mid ka badan wax ku ool ah sida technology hagaajinaysaa. dhibaatooyinka waxay la abuuro aad wax soo saarka gaar ah ka dhigan tahay in cilmi kuwaas oo doonaya in la xakameeyo soo saarka badan u badan tahay in lamaanahaaga waa shirkad, mawduuca waxaan ka qabato doonaa ee soo socota.
Jaantuska 4.15: Haddii aad si guul leh u dhisi kartaa wax soo saarka gaar ah, oo aad ka faa'iidaysan karaan loop a-celin wanaagsan, cilmi keenaysaa in wax soo saarka si fiican taas oo horseedaysa in dadka isticmaala in ka badan taas oo horseedaysa in ay cilmi-baaris xitaa more. Noocaas ah oo siddooyinkuna ra'yi-celin wanaagsan yihiin cajiib ah ay adag tahay in la abuuro, laakiin waxay awood kartaa cilmi in aan noqon doono suurto gal ah haddii kale. MovieLens waa tusaale ka mid ah mashruuca cilmi baarista in uu leeyahay ku guulaystaan ​​abuuro loop-celin wanaagsan a a (Harper and Konstan 2015) .